Ahoana ny fomba fitondrana SEO?
Misy karazana tranokala telo karazana: Paid, Social, ary SEO. Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny fifamoivoizana momba ny fifamoivoizana SEO fotsiny. Androany aho dia hanome torohevitra mahasoa izay hanampy anao hampitombo ny isan'ny tranonkala.
Sefo SEO mba hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokala
Fantaro ny loharanom-pifandraisana
ny tranokalanao na ny fametrahana tetik'ady ara-barotra vaovao, dia tsy maintsy mamantatra ny fomba ahitan'ny olona ny loharano misy anao ianao. Mijere haingana any amin'ny Analytics ary alao ny valin'ireto fanontaniana manaraka ireto:
Inona ireo fehezan-teny tena tianao hiditra ao amin'ny baravarao Google raha te hahita ny tranokalanao;
Inona avy ireo loharanom-pitaovana ampiasain'ny mpampiasa mba hiditra ao amin'ny tranokalanao;
Inona avy ireo pejy ao amin'ny tranokalanao no be mpitsidika indrindra sy azo henoina;
Ireo lafiny telo ireo dia tena manampy tokoa amin'ny fampandrosoana ny paikady fanadiovana fikarohana.
Fidio tsara ny sora-baventy
Rehefa mifidy ny teny fanalahidy dia zava-dehibe ny mamantatra izay tianao hitarika ny olona ao amin'ny site. Angamba, ireo dia hampiditra ny vokatra na ny serivisy azonao amidy. Raha toa ka orinasa iray eo an-toerana ianao, dia tadidio fa ny fehezanteny misy anao dia ahitana ny anaran'ny tanàna.
Ampio ny fikarohana amin'ny teny filamatra. Alefaso ny lisitry ny fehezan-teny manan-danja izay mety hitadiavanao mpanjifa. Rehefa vita izany, dia ampiharo azy ireo amin'ny pejy tsirairay ao amin'ny tranokalanao.
Ampidino ny teny fanalahidy ho an'ny votoatin'ny natiora
Avadiho ny teny fototra. Aza adino ny tenyo amin'ny teny maro. Alohan'ny hamoahana ny lahatsoratrao dia vakio mafy izy ireo - tokony ho afaka mamaky ny lahatsoratrao ianao fa tsy misy feo tahaka ny bot no nanoratra izany. Ireo manam-pahaizana Semalt dia manoro hevitra ny hanampiana ireo teny fanalahidy any amin'ny faritra manaraka:
Fehintsoratra voalohany amin'ny votoatinao;
Ny kopia manontolo sy ny endriky ny soratra.
Mampiasà lohateny sy famaritana
Manangana lohateny na famaritana SEO iray hafa dia fomba hafa hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokala. Ataovy azo antoka fa mameno ny anaram-boninahitra sy ny famaritana ny pejy rehetra ianao satria izy ireo dia hita ao amin'ny valin'ny fikarohana. Ny lohateny sy ny famariparitana an-tsoratra dia manampy ny mpampiasa hanao safidy haingana raha toa ka manome izay tadiaviny ny tranokalanao.
Optimize ny blôginao amin'ny SEO
Ny bilaogy dia toerana iray hafa mila SEO. Ny vaovao mahafaly dia ny hampahomby kokoa ny blôginao ho an'ny SEO satria mamorona votoaty votoaty ianao, mifototra amin'ny hevitra tokana. Apetraho ao anaty lahatsoratra amin'ny blôginao ny teny fanalahidy, fa apetraho 1-2 ny hafatra tsirairay mba tsy hisakafoanana.
Mitandrema amin'ny antso-to-action
Ny fihetsika dia singa iray manan-danja amin'ny programan'orinasa mahomby. Nilaza ny manam-pahaizana SEO fa tsy misy zavatra toy ny fampielezan-kevitra mahomby raha tsy misy ny CTA. Anisan'izany ny antso an-tariby manampy ny mpamaky hahatakatra ny zavatra tianao hatao, na izany dia: manorata lisitra, mifandray amin'ny anao, na manao mividy. Ankoatra izany, ny CTA dia fomba hafa ahafahanao mitondra fiara bebe kokoa SEO amin'ny tranokalanao.
Miovaova foana ny SEO. Miaraka amin'ny algorithm Google rehetra, miova kely ny fitsipika. Ny fiheverana ny fironana SEO dia hanampy anao hitoetra ao an-tampon'ny valin'ny fikarohana Google. Ampiasao ireo toro-làlana SEO eo ambony ireo amin'izao fotoana izao ary jereo izay manjo ny fifamoivoizan'ny tranonkala Source .